Shan arimood oo ku saabsan doorashada Canada - BBC News Somali
Image caption Musharaxiinta tartamaya
Shacabka Canada ayaa doorasho u dareeri doono 21-ka bisha October, si ay u go'aansadaan in markale ay fursad siinayaan xisbiga ra'iisul wasaaraha hadda, Justin Trudeau iyo in kale.
Kadib markii uu guul taariikhi ah soo hooyay afar sano ka hor, hogaamiyaha xisbiga Libralka ee dalka Canada Justin Trudeau oo 47 sano jir ah,ayaa mar labaad u sharaxan jagada ra'iisul-wasaarenimo.
Hogaamiyaha xisbiga muxaafidka ee Canada Andrew Scheer ayaa rajeynaya inuu xilka kala wareegi doono ra'iisal wasaaraha oo ra'iisul wasaare loo doortay sanadkii 2017-kii.
Musharixiinta kale ee u tartamaya xilka ra'iisul wasaarenimo waxaa kamid ah Jagmeet Singh oo ka socda xisbiga New Democratic Party iyo Elizabeth May oo ka socota xisbiga Green Party of Canada.
Hase yeeshee natiijooyinka doorashada iyo sida ay xisbiyadu ugu soo baxaan waxay ku xiran tahay ololaha doorashada shanta usbuuc ee soo socota soconeysa taasoo noqon doonta mid ay codbixiyeyaasha ay ku go'aansadaan cidda ay codkooda siinayan.
"Waxaa jira "rajo taxaddar u bahan" marka loollanka dooarshada la guda galo",ayuu yiri Saskatchewan and Alberta oo Maareeya ololaha doorashada xisbiga. Xisbiga Green wuxuu isku dayayaa inuu siyasadda uu door ku yeesho oo ay codbixiyeyaasha codkooda siiyaan "balse taa waxay leedahay xoogaha Khatar ah" ayuuna sii raaciyey.